Tajaajilli Niitoorkii Bilbilaafi Interneetiin Godina Wallagga Lixaafi Qellem Wallaggaa irraa erga citee guyyaa sadii ta’eera - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTajaajilli Niitoorkii Bilbilaafi Interneetiin Godina Wallagga Lixaafi Qellem Wallaggaa irraa erga citee guyyaa sadii ta’eera
Tajaajilli Niitoorkii Bilbilaafi Interneetiin Godina Wallagga Lixaafi Qellem Wallaggaa irraa erga citee guyyaa sadii ta’eera
Tajaajilli Niitoorkii Bilbilaafi Interneetiin Godina Wallagga Lixaafi Qellem Wallaggaa irraa erga citee guyyaa sadii ta’eera jedhan dhalattoonni Godinichaa.
Ji’oota 6 dura Oromiyaa Lixaa irraa guutuu guutuutti tajilli sarara bilbilaa (Niitoorkii) addaan citee turuunsaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana ammoo Godina Wallagga Lixaafi Qellem Wallaggaatti niitoorkiin adda cituu dhalattoonni Godinichaa Finfinnee jiraatan OMN-tti himan.
Akka namoonni kun jedhanitti, tajaaajilli sarara bilbilaa Godina lamaanitti adda cituunsaa guyya lama dura (Jimaata waare booda) ta’uusaati.
Kaleessan Qellem Wallaggaarraa gara Finfinnee dhufuusaa kan dubbatu namni tokko, sochiin Godinaalee kana keessatti qaamolee mootummaatiin taasufamu hedduu kan nama sodaachisu ta’uu hima. Uummatni nagaa, qaamoleen siivilii bakka garaagaraatti poolisii Oromiyaatiin ajjefamaafi reebamaa jiraachuus dubbbata namni kun. Keessattuu Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisootti, ‘maqaa Shanee seeratti dhiheessuu’ jedhuun, namoonni hedduun hidhamuufi barsiisonni ganda baadiyyaa aanichaa keessatti ajjeefamuus nama kanarra odeeffanneerra.
Jiraataan magaalaa Finfinnee dhalootaan Gimbii ta’e kan OMN bilbilaan dubbise akka jedhutti, “sababa niitoorkiin addaan cituusaatiin hafuura maatii koo, ergan dhaga’e guyyaa sadaffaadha. Haala rakkisaa bakka sana jiru keessatti maatii ofii utuu quba hin qabaatin turuun hedduu ulfaatadhas” jedha.
Sararri bilbilaa Godinoota lamaa kanarraa adda cituusaan wal qabatee, Dhaabbanni Itiyoo Telecom hanga ammaatti waan jedhe hin qabu.
Haala bakka sana jiru hordofuun kan isin qaqqabsiifnu ta’a.
Lola Tigraay: Gamtaan Afrikaa jiddu galee araara akka buusu naannoon Tigraay gaafate